[Lahatsary] Ny vahoaka tompotany sy ny fampiasana ny teknolojia ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Nandika (pt) i Rafael Lima
Voadika ny 16 Janoary 2020 6:19 GMT
Sehatra iray mora asongadina amin'ny endriky ny fampiasana, ny fampiharana ary ny fifandraisana napetraky ny vahoaka indizeny tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny teknolojiam-baovao sy ny serasera (TIC), ny aterineto ary ny tambajotra sosialy ny fanjakan'i Oaxaca. Raha heverintsika ny fombam-pifandraisana lehibe indizeny tany Oaxaca dia afaka manamarika fotoana roa isika nanamafisana sy niraisankina: ny fitroarana Zapatista tamin'ny taona 1994 sy ny hetsika tamin'ny taona 2006 tany Oaxaca.
Saingy ankoatra ny olana nateraky ny hantsana ara-teknolojia eo an-toerana, dia tianay ny hampiseho hoe aiza ho aiza ao anatin'ny fandraisana ny teknolojia no ahitana hetsika ara-politika sy ara-kolontsaina ary hatraiza ny anjara toeran'ny olona mandray anjara. Amin'izany no hahitantsika ny fampiasana ny tambajotra sosialy nomerika sy ny TIC any amin'ny tontolon'ny tompotany. Hahita tranga vitsivitsy isika izay ahitana ny fisongadin'ireo dingana toy ny fizakantena nomerika sy ny fananganana votoaty manokana.
Ny tanjon'ny lahatsary dia ny hampielezana sy ny hampahitana ny halehiben'ny fampiasan'ny vahoaka tompotany ao Oaxaca ny teknolojia nomerika, ny aterineto ary ny tambajotra sosialy. Nalaina tamin'ny volana Janoary 2018 ity lahatsary ity ary narafitra nandritra ny taona 2019. Nahazo fanohanana ara-bola avy amin'ny fandaharanasa UNAM-PAPIIT “Ny tambajotra sosialy sy ny vahoaka indizeny” IA300418 ihany koa izy io.
Fikarohana: Elena Nava
Sehatr'asa : Elena Nava sy Damián López
Scénario: Elena Nava sy Leslie Cruz
Feo: Leslie Cruz
Fakantsary: Damián López
Famoahana: Leslie Cruz